Qaramada Midoobey oo Kenya la hubinaysa amaanka iyo xasiloonida dalkaas oo muhiim u ah gobolka – Radio Daljir
Oktoobar 26, 2013 4:00 b 0
Nairobi, October 26, 2013 – Qaramada midoobey ayaa dadaal u galaysa sidii ay gacan uga gaysan lahayd sugida amniga dalalka barriga Afrika, war ka soo baxay dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in gollaha amaanka ay il gaar ah ku eegayaan gobolka.
Magaalada Nairobi oo ay kulan ku qaateen madaxweynaha Kenya Uhurru Kenyatta iyo ku xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada midoobey Jan Eliasson ayaa waxaa ka soo baxay war lagu sheegay in qaramada midoobey ay hubinayso aminga Kenya maadama ay tahay meel muhiim u ah gobolka.
Madaxweyne Kenyatta ayaa hadalka qoraalka ah ku yiri ?Amaanka Kenya waa mid muhiim hubintiisa, waxaan rabnaa in aan xaqiijino amniga qof walbaa oo ku nool iyo qoysaska kale, waxaan kordhinay adkeynta ammaanka iyo feejignaanta dheeriga ah?
Ku xigeenka xoghayaha guud ee Qaramada midoobey Jan Eliasson waxaa uu Kenya ku amaanay doorka ay ka qaadatay soo celinta xasiloonida dalka Soomaaliya, waxaa uu intaas ku daray Kenya ay muhiimvu tahay isu socodka iyo shaqada gobolka.
Al-shabaab ayaa weeraro Argagixiso oo waa wayn ka fuliyey Kenya bishii hore waxaa dhintay 67 markii la galay dhismaha Westgatte oo ah suuq ku yaala xaafada Westland ee magaalada Nairobi,? halkaas oo ka mid ah meelaha ay degan yihiin safaaradaha caalamiga ah iyo hay?adaha gargaarka ee Qaramada midoobey.